जो पानीमा ‘आगो’ बालेर गए- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कवि पूर्ण वैद्य भनिरहन्थे, ‘छन्द, मात्रा, अनुप्रास जम्मै जोडेर जुन शब्दहरुको थुप्रो बन्छ, यदि त्यसमा कविता नै जोड्न बिर्सिएछ भने त्यसलाई कसरी कविता भन्ने ? कवितामा छन्द नभए पनि हुन्छ, मात्रा नभए पनि हुन्छ । तर, कविताचाहिँ हुनुपर्छ ।’
पूर्ण वैद्य अन्तरमुखी थिए, कम बोल्थे । उनी कवितामा कम बोल्थे, बढी बुझाउँथे । सायद कवितामा नबोलेका धेरै कुरा उनको मनमै कतै अड्किएको हुँदो हो ।
भाद्र १९, २०७८ सुरेश किरण
उतिबेला नेपालभाषामा (र नेपालीमा पनि) लेखिने पद्य कविताहरूमा उनी पद्य मात्रै देख्थे, कविता देख्दैथे । उनी वास्तवमा त्यस्ता कविताको खोजीमा थिए, जसमा केवल कविता मात्रै होस्, कविता सिबाय अरू केही नहोस् ।
यो सम्भवतः विसं २०१६–१७ सालतिरको कुरा हुनुपर्छ । उनी त्रिचन्द्र कलेजा पढ्थे । त्यहाँ उनका कवि मित्रहरू थिए— श्यामसुन्दर सैंजु, रमेश मधु आदि । त्यहीं उनले नेपालभाषामा छन्दविहीन कविताहरू लेख्न थाले । तर, तत्कालीन साहित्य–वृत्तमा उनको कविता स्वीकृत हुन सकेन । कवि मण्डलीमा पनि उनका कविता तिरष्कृत थिए । साथीहरू उनलाई व्यंग्य कस्दै भन्ने गर्थे– जसलाई छन्दको ज्ञान छैन, उसले कसरी कविता लेख्ला र ?
त्यतिबेलाको लोकप्रिय ‘झी’ (हामी) पत्रिकामा कविता पठाउँदा साथीहरूका कविता छापिन्थे, उनको छापिँदैनथ्यो । यसले उनलाई यति अपमानवोध गराउँथ्यो कि उनी झन् अरू गद्य लेख्न कसिन्थे ।
त्रिचन्द्र कलेजमै उनका अर्का साहित्यकार मित्र पनि पढ्ने गर्थे, मोहनहिमांशु थापा । थापा नेपालभाषा पढ्ने मात्र होइन, नेपालभाषामा लेख्ने कवि पनि हुन् । उनले पूर्ण वैद्यको पाण्डुलिपि पढे, जसको शीर्षक थियो– ‘जितः गुलि मछिं थ्व संतप्त फिसलय् दनाः ।’ कविता राम्रो लाग्यो । त्यसपछि थापाले त्यसलाई नेपाली भाषामा उल्था गरे । शीर्षक पनि आफैं हाले, ‘यस संतप्त धरतीमा उभिएर ।’ थापाले त्यो कविता भारतको बनारसबाट प्रकाशित हुने ‘उदय’ पत्रिकामा छपाए । पूर्ण वैद्यको पहिलो प्रकाशित कविता त्यही बन्यो ।
थापाले नै उनको अर्को कविता ‘सन्ध्याया ई’ लाई पनि नेपालीमा अनुवाद गरी त्रिचन्द्र कलेजबाटै प्रकाशित हुने ‘ज्योति’ पत्रिकामा छपाए । त्यसपछि मात्रै हो, नेपालभाषाका साहित्यकारमा पूर्ण वैद्य ‘नोटिस’ हुनथालेको । उनका कविताहरू नेपालभाषाका पत्रिकाहरूमा पनि प्रकाशित हुनथाले । यसैक्रममा विसं २०२२ सालमा उनको गद्य कवितासंग्रह ‘सरासु : निष्पट्ट अँध्यारोमा पहिलो किरण)’ को पाण्डुलिपिलाई च्वसापासा नामक संस्थाले प्रतिष्ठित श्रेष्ठ सिरपाः (पुरस्कार) प्रदान गर्‍यो । यो नै नेपालभाषाको पहिलो गद्य कवितासंग्रह थियो । यो संग्रह प्रकाशनपछि पूर्ण वैद्यलाई नेपालभाषामा गद्य कविताका पहिलो सर्जकको सम्मान प्राप्त भयो ।
यसरी पूर्ण वैद्यले नेपालभाषा काव्य इतिहासमा करिब ६०० वर्षअघिदेखि लेखिँदै आएको पद्य विधालाई छिचोलेर पहिलोपटक गद्य कविताको आरम्भ गरे । काव्य क्षेत्रमा ‘सरासु’ एउटा भूकम्पजस्तै प्रकट भयो, जसले ठूलै हलचल मच्चायो र मक्किएका धेरै कुरा भत्कायो । तत्कालीन रोमानीवादका प्रणेता सिद्धिचरण श्रेष्ठले उनको त्यो संग्रह पढेर आफू झस्याङ्ग भएको लेखेका छन् । झस्याङ्ग भएर पनि नलेख्नेहरू अझ धेरै छन् ।
नेपालभाषा काव्यको इतिहासमा ‘सरासु’ एउटा मानक कृति बनिसकेको छ । नेपालभाषा काव्यको इतिहास लेख्दा ‘सरासु’ अघि र ‘सरासु’ पछि भन्ने दुई स्पष्ट कालखण्ड बनाउने गरिन्छ । ‘सरासु’ का कारण उनी आफैं पनि एक मानक कविका रूपमा स्थापित छन् । अहिले नयाँ आउने कविहरूमा जसले अलि गतिलो लेख्छ, समालोचकहरू उसलाई ‘भविष्यको पूर्ण वैद्य’ भनेर जोख्न थालिहाल्छन् । नेपालभाषामा यस्तो प्रेरणाको श्रेय कि दुर्गालाललाई छ, कि पूर्ण वैद्यलाई मात्रै छ ।
नेपालभाषाका अधिकांश साहित्यकार केवल लेखनमा सीमित छैनन् । भाषिक समानताको आन्दोलनमा उनीहरू सडकमा पनि उत्रिरहेका हुन्छन् । जस्तो दुर्गालाल श्रेष्ठ, मल्ल के. सुन्दर, बुद्ध साय्मि, प्रतिसरा साय्मि आदिहरू हरेकजसो आन्दोलनमा कहिले राँको बालिरहेका हुन्छन्, कहिले टायर बालिरहेका हुन्छन् । तर, पूर्ण वैद्य सडकमा आगो बाल्ने त्यस्ता कार्यक्रममा कमै उपस्थित हुन्थे । तथापि यसको अर्थ उनी आगोसँग डराउँछन् भन्ने होइन । उनी पनि आगो बालिरहन्थे, तर पानीमा । पछिल्लो समय उनले लेखेका ‘पानी कविता’ हरू यथार्थमा जम्मै आगो हुन् । उनले लेखेका छन्–
आफैंभित्र आगो नभई
पानी पनि कहाँ पानी भएर बस्न सक्छ र ?
उनले पानीलाई मात्रै विम्ब र प्रतीक बनाएर लेखेका कविताहरूको संग्रह ‘लः लः खः (पानी पानी हो)’ केही वर्षअघि प्रकाशित भयो । पहिलो संग्रह प्रकाशनको करिब ३० वर्षपछि निस्केको यो संग्रहमा जो पूर्ण वैद्य भेटिन्छन्, त्यो ‘सरासु’ वाला पूर्ण वैद्य होइन । उनको दोस्रो संग्रह यसरी निस्कियो, जसमा कृति मात्र होइन कवि नै फरक हुन् कि जस्तो लाग्छ । यो संग्रहले उनको परिचय ‘पानी कवि’ मा रूपान्तरण गरिदियो । आफूभित्रका सम्पूर्ण आक्रोस, प्रेम, घृणा, विद्रोह, असन्तोष, उकुसमुकुसलाई उनले पानी बनाएर पोखेका छन् यो किताबमा । नेपालभाषा मात्र नभई नेपाली साहित्यका लागि समेत यो एउटा नयाँ प्रयोग थियो । यसभित्रका ९० वटा कविता लेख्न उनलाई ४० वर्ष लागेको थियो । यी कविता लेख्न बस्दा कतिपय ठाउँमा उनी पानी भएका छन्, कतिपय ठाउँमा पानी उनी भएको छ । पानीलाई आफू बनाउँदै उनी लेख्छन् :
भेटिए जति उचाइहरू भत्काएर,
भेटिए जति खाडलहरू पुरेर
यो धरतीको विषम धरातल
पानीले मलाई प्रमाणित गर्छ, कि
भनौं, मभित्रकै एउटा आतुर वेग हो
समानताप्रति तीव्र प्रतीक्षाको ।
उनको ‘लः लः खः’ संग्रहले साहित्य मात्र होइन, समग्र भाषाकै स्तरलाई एक तह माथि पुर्‍याइदिएको ठहर गरेका छन् डा. कमलप्रकाश मल्लले । त्यो किताब नेपाली र अंग्रेजी भाषामा समेत अनुवाद भइसकेको छ ।
नेपालभाषाको कवितालाई छन्दबाट बाहिर निकाल्ने श्रेय पाएका पूर्ण वैद्यलाई कत्तिले छन्दविरोधी कवि पनि भन्छन् । किनभने उनको मान्यता थियो— कवितामा पढ्ने भनेको कविता मात्रै हो, छन्द होइन । छन्द त कविताको खोल मात्रै हो । भित्रको वस्तु अब्बल छैन भने खोल राम्रै भएर के अर्थ ?
तर, उनी आफैंचाहिँ छन्दविरोधी भएको स्विकार्दैनथे । ‘म छन्दमा लेख्ने कविहरूको विरोधी होइन, कविता भनेको छन्दमै मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने जिरहको मात्रै विरोधी हुँ,’ उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
कम शब्द खर्चेर धेरै भन्न सक्नु उनको खुबी हो । त्यसैले तीन लाइनका हाइकु लेख्ने केही नयाँ कविहरूले उनलाई हाइकुतिर पनि कलम चलाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘ओहो ! मात्र १७ वटा अक्षरमा आफ्ना जम्मै कुरा भन्न सक्ने क्षमता ममा छैन । म त्यो आँट गर्न सक्दिनँ ।’
कविताबाहेक उनी निबन्ध पनि लेख्थे । त्यसो त त्यो पनि भन्नु मात्रै निबन्ध हो, त्यसलाई पंक्ति–पंक्तिमा लेखिएको कविताभन्दा फरक नपर्ला । ‘जि छगू अभिव्यक्ति युगया (म एउटा अभिव्यक्ति युगको)’ नामक उनको निबन्धसंग्रह पनि प्रकाशित छ । त्यो संग्रहले पनि श्रेष्ठ सिरपाः (पुरस्कार) जितेको थियो ।
त्यस्तै उनका साहित्य र काव्यसम्बन्धी अवधारणाको एउटा संग्रह पनि प्रकाशित छ । ‘कविताया लागा (कविताको क्षेत्र)’ शीर्षकको उक्त संग्रहलाई डा. मोहनहिमांशु थापाले ‘पूर्ण वैद्यको पहिचान’ बोक्ने कृति भनेका छन् । त्यस्तै उनले जापानी भाषाका कवि सुन्तारो तानिकावाको एउटा कविता संग्रह पनि नेपालभाषामा अनुवाद गरेका छन् ।
पूर्ण वैद्य अन्तरमुखी थिए, कम बोल्थे । कम पनि कति भने उनी कवितामा पनि कम मात्रै बोल्थे, बढी बुझाउँथे । सायद कवितामा नबोलेका धेरै कुरा उनको मनमै कतै अड्किएको थियो । त्यो निकाल्न उनीसँग भेट्ने मेसो मिलाउँदै थिएँ । गत असारको अन्तिम दिन मात्रै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीका हातबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको नेपाल मातृभाषा प्रज्ञा पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए । त्यो उनले पाएको अन्तिम पुरस्कार हो । त्यही सन्दर्भमा उनको लामो अन्तर्वार्ता गर्ने समय मिलाउँदै थिए । अचानक खबर आयो, उनी कब्जियतका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन् । भोलिपल्ट अर्को खबर आयो, उनलाई कोभिड पनि भएको छ । तेश्रो दिन अर्को खबर आयो, उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । छैटौं दिन अन्तिम खबर आयो... उनी रहेनन् !
विसं १९९७ को जनैपूर्णिमाका दिन भक्तपुरमा जन्मेका कवि वैद्य गएको जनै पूर्णिमाका दिन ८१ वर्ष लागथे । जन्मदिनको पाँच रातपछि भदौ १० गतेका दिन उनी बिते । उनका कविता आउनु नेपालभाषा साहित्यका लागि जसरी भूकम्प हुने गर्थ्यो, उनको जानु पनि साहित्यका लागि पहिरो भएको छ । उनी भूकम्प भएर आए, पहिरो भएर गए । सायद पानीजस्तै ।
बिलले तथ्यांकलाई सरल शैलीमा पेस गर्दै जवाफ दिएका छन्, ‘ताता दिनहरू आउनेछन् । मान्छेले नयाँ स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्नेछन् । नयाँ ठाउँहरूमा लामखुट्टे बसाइँ सर्नेछन् । औलो (मलेरिया) प्रकोप नयाँ ठाउँमा भेटिनेछ । ‘पोलार आइस’ पग्लिनेछ । सामुद्रिक सतह बढ्नेछ ।’
भाद्र १९, २०७८ कृष्ण ढुंगाना
मान्छेले दिनदिनै जीवनयापनका सुविधा र उपभोग क्षेत्र थप्दै गइरहको छ । हातहातमा चल्ने स्मार्टफोनको ब्याट्री आयु बढाउनेदेखि, लाखौं टेगाबाइट डाटा भण्डारण गर्ने क्लाउड सेन्टरसम्म । खाना पकाउने चुल्होदेखि एउटा बटन दबाउँदा तातो/चिसो पानीले दिशा धुने ट्वाइलेट ब्रससम्म । प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा करोड डलर कमाइ गर्ने ठूला उद्योगदेखि लिफ्टको सहारामा चढ्नुपर्ने गगनचुम्बी व्यापारिक भवनसम्म । रिमोट दबाउँदा घरकै ताप आफूअनुकूल बनाइदिने एयर कन्डिसनदेखि सिटमा मसाज सुविधा भएका सवारी साधनसम्म ।
सिमेन्ट निर्मित घर, कार र सुविधायुक्त सहरिया जीवन पाउँदा को खुसी हुँदैन ? अझ विकासशील देशमा बसोबास गर्ने, परम्परागत पेसा अपनाउँदै आएका मानिसका लागि यस्तो आधुनिक जीवनशैली ठूलै उल्लास हो । तर, ब्रह्माण्डीय संरचनाको सामान्य नियम छ– अन्धाधुन्ध प्रकृति दोहन र ऊर्जा खपत जसले गरे पनि त्यसको सजाय पृथ्वीवासीले पाउँछन् । शासनका लागि मानिसले पृथ्वीलाई राजनीतिक, आर्थिक एकाइमा विभाजन गरे पनि प्राकृतिक तहमा यो एउटा ग्रह मात्रै हो । त्यसका संरचनामा पर्ने अप्ठ्यारो यहाँका प्राणीका लागि विपत हो । त्यसैले अन्धाधुन्ध प्रकृति दोहन र जैविक इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास) सहितको ऊर्जा खपतका कारण वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने ग्रिनहाउस ग्यास पृथ्वीवासी मानिसका सरोकारका विषय हुन् । जलवायु परिवर्तनको विपत् मानव स्वास्थ्य र जीवनसँग सीधै जोडिने विषय हो । अमेरिकी लेखक एवं माइक्रोसफ्ट संस्थापक बिल गेट्सको नयाँ गैरआख्यान किताब ‘हाउ टु अभोइड अ क्लाइमेट डिजाइस्टर ः द सोलुसन वी ह्याब एन्ड द ब्रेक थ्रुज्स वी निड’ ले जलवायु परिवर्तन खतराको फेहरिस्त भन्छ । किताबले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको विपत् सामना गर्ने व्यावहारिक मार्गचित्र पेस गर्छ । किताबलाई ‘न्युयोर्क टाइम्स’ सहितका पत्रिकाहरूले ‘बेस्ट सेलर’ सूचीमा राखेका छन् ।
परिचयबाहेक १२ च्याप्टरमा विभाजित २७५ पृष्ठको पुस्तकमा बिल गेट्सले आर्थिक समृद्धिको सीधा सम्बन्ध पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र प्रकृति दोहनसँग रहेको तथ्य केलाएका छन् । किताब मूलतः दुई अंकवरिपरि घुमेको छ, ५१ बिलियन र शून्य । मानव निर्मित प्रदूषणले बर्सेनि वायुमण्डलमा थप भइरहेको हरितगृह ग्यासको परिमाण ५१ बिलियन टन हो । पर्यावरणीय सन्तुलन मिलाउन यो कतिमा झर्नुपर्छ ? असाध्यै कठिन भए पनि त्यो संख्या शून्य हुनुपर्ने लेखको बुझाइ छ । सारा विश्व ऊर्जा खपत दौडमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा करिब असम्भव लाग्ने यत्रो परिवर्तन किन आवश्यक छ ? बिल गेट्स लेख्छन्, ‘पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुको कारण वायुमण्डलमा थुप्रिएको ग्रिनहाउस ग्यास हो । वायुमण्डलमा त्यो जति धेरै थुप्रिनेछ, पृथ्वी उति धेरै तात्दै जानेछ । त्यसैले अब कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको दौड घटाइनुपर्छ ।’
जलवायु परिवर्तनको आर्थिक सम्बन्ध
किताबको दोस्रो च्याप्टरले जैविक इन्धनसँग मानवीय गतिविधिको सम्बन्ध उजागर गर्छ । बिहान उठेर दाँत माझ्नेदेखि राति ओछ्यानमा पल्टिने बेलासम्म मानिसको जीवनशैली ऊर्जा–खपत र कार्बन–उत्सर्गनसँग अलग हुनै नसक्ने गरी जोडिएको छ । र, किताबले त्यो घटाउन आइपर्ने चुनौतीको उपाय सुझाउँछ । स्वस्थ जीवन बाँच्दै आयु लम्ब्याउनेदेखि आर्थिक संबृद्धि गर्नेसम्म मान्छेले पछिल्ला शताब्दीमा गजब राम्रा आविष्कार गर्‍यो । तर, करिब ती सबै नै जैविक इन्धन र ऊर्जा खपतमा आधारित छन् । जैविक इन्धन र सिमेन्टको प्रयोग व्यापक नभइसकेको औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् १८ औं शताब्दीअघि पृथ्वी तात्ने अनुपात अहिलेजस्तो थिएन । लेखकले पात्रो पल्टाएरै देखाएका छन्, आधुनिकीकरणको सुरुआतसँगै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यधिक थप भएको हो ।
किताबमा अमेरिकी उदाहरण धेरै प्रयोग भए पनि एकै विधिमा आधारित ऊर्जा प्रयोग, आधुनिक जीवनशैली, सम्भावित जोखिम र न्यूनीकरणका फेहरिस्त सबैका लागि उपयोगी छन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङका प्रोफेसर डेभिड म्याकीको तथ्यांकको साहरामा किताब भन्छ, ‘प्रतिव्यक्ति आय र ऊर्जा खपतको सम्बन्ध छ । बढी कमाउनेले धेरै ऊर्जा खपत गरिरहेछन् र थोरै कमाउनेले थोरै ।’
पछिल्लो समय चीनको चर्चा आर्थिक उन्नति, कम्युनिस्ट सत्ता, सस्तो श्रम बजार, विशाल भौतिक संरचना निर्माण र दक्षिण पूर्व एसियाको उदाउँदो शक्ति केन्द्रका लागि विश्व मञ्चहरूमा हुनेगर्छ । उपभोग गर्न पाउनेका लागि आधुनिक जीवनयापन खुसीकै विषय हो । तर, जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले चीनको अर्को चित्र किताबले देखाएको छ । सन् २००६ देखि अमेरिकालाई उछिनेर वायुमण्डलमा बर्सेनि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा छ चीन । पृथ्वी तात्ने विपत् नजिक आइरहे पनि भारत र नाइजेरिया चीनलाई भेट्न त्यही बाटोमा छिटोछिटो दौडिरहेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआतका सन् १७६० देखि अहिलेसम्मका १८१ वर्षलाई फर्केर हेर्दा मानिसले पहिले आर्थिक गरिबी घटाउन अन्धाधुन्ध प्रदूषण बढाउने र पछि स्वच्छ वातावरणको खोजी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यो परिवर्तनको गर्न नयाँ अवधारणा बिलले सार्वजनिक गरिदिएका छन् । लेख्छन्, ‘पृथ्वी तातेर वातावरणीय संकट गहिरिनुमा यो नै मुख्य कारण हो । अब आधुनिक जीवनयापन र आर्थिक समृद्धि प्राप्ति प्रक्रियामा वातावरण विनाशको पासोमा नपर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।’
सरकारका नीतिले अर्थ राख्नेछ
किताबले तथ्यांक केलाउँदै सन् १८५० देखि अहिलेसम्म मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस बढेको प्रस्ट चित्र देखाउँछ । सुन्दा सानो लागे पनि पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुनु सामान्य होइन । यो विपत्को संकेत हो । तथ्यांक केलाउँदै पुस्तकले देखाएको छ, ‘सन् २०६० सम्म न्युयोर्क आकारका ठूला सहर प्रत्येक महिना थप भइरहने छन् । अहिलेकै अनुपातमा विश्व अघि बढिरहे सन् २०५० सम्ममा ऊर्जा माग ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । र, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अनुपात पनि करिब ५० प्रतिशत नै बढेर जानेछ ।’ बहुकोणबाट तथ्यांक केलाउँदै पुस्तकले औंल्याएको छ, ‘यदि यो वृद्धिदर रोकेनौं भने सन् २०५० सम्म पृथ्वी १.५० देखि ३ डिग्री सेल्सियससम्म तात्नेछ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वी ४ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तात्नेछ ।’ पृथ्वी तात्न रोकिएन भने नि ? बिलले तथ्यांकलाई सरल शैलीमा पेस गर्दै जवाफ दिएका छन्, ‘ताता दिनहरू आउनेछन् । मान्छेले नयाँ स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्नेछन् । नयाँ ठाउँहरूमा लामखुट्टे बसाइँ सर्नेछन् । औलो (मलेरिया) प्रकोप नयाँ ठाउँमा भेटिनेछ । ‘पोलार आइस’ पग्लिनेछ । सामुद्रिक सतह बढ्नेछ ।’
ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वी तात्दै गए त्यसबाट सबैभन्दा पहिले अविकसित देशका गरिब मानिसलाई असर पर्ने पुस्तकको निष्कर्ष छ । भारत, सिरियासहित कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप खडेरी पर्नेदेखि भूमि अवक्रमण (ल्यान्ड डिग्रिगेसन) सम्म देखिन थालेको छ । पृथ्वी तात्तिँदै जाँदा हुने मरुभूमीकरण र उत्पादन कमीको सम्बन्ध कृषकदेखि उपभोक्तासम्मै रहेको चित्र पुस्तकले देखाउँछ । भारतमा किसानहरूले गरिरहेको आत्महत्यादेखि सिरियामा कृषि पेसाबाट पलायन लाखौं मानिसको मर्मस्पर्शी कथालाई लेखकले जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा औंल्याएका छन् ।
आधुनिक जीवनयापनसँगैसँगै कार्बन उत्सर्जन न्यून पार्ने र सकेसम्म शून्यमै झार्ने नयाँ उपायको खोजी पुस्तकमा छ । सौर्य, हावा (विन्ड) मिलजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अहिले पनि भइरहेको छ । हावाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पंखा सधैं घुम्दैन र सूर्यबाट पनि सधैं ताप आइरहँदैन । पुस्तक भन्छ, ‘नवीकरणीय ऊर्जा छँदैछ । योबाहेक छलाङ मार्ने नयाँ प्रविधिको अविष्कार अबको आवश्यकता हो ।’ जैविक इन्धन उत्पादनस्थलमै उपकरण उपयोग गरी कार्बन ‘क्याप्चर’ गर्दा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन न्यून पार्न सकिने अर्को उपाय किताबमा छ । तीन चीज एकैसाथ सँगै लगेर जलवायु विपत्बाट जोगिन सकिने उपाय किताबले देखाएको छ– जलवायु टेक्नोलोजी, नीति र बजार । यसमा पनि सरकारी नीतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ । जलवायु विपत्बाट जोगिन सरकारहरूले अपनाउनुपर्ने ७ मार्गचित्र पुस्तकमा प्रस्तुत छ ।
जलवायु परिवर्तन झनै घातक
कोभिड—१९ महामारीले विश्व विक्षिप्त भएको समयमा सार्वजनिक पुस्तकले जलवायु परिवर्तनको विपत्को असरबाट जोगिन प्रत्येक तहका मानिसले काम गर्नुपर्ने विधि सुझाएको छ । सार्वजनिक बहसदेखि नीति निर्माणका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ । लेखकले जलवायु परिवर्तन विपत्लाई कोभिड–१९ महामारीसँगै तुलना गरेर तथ्यांक देखाइदिएका छन् । ‘यदि पृथ्वी तात्ने कार्य नरोकिए यो शताब्दीको मध्यसम्म पुग्दा जलवायु परिवर्तनबाट कोभिड–१९ जत्तिकै मानवीय, आर्थिक क्षति हुनेछ’, तथ्यांक केलाउँदै पुस्तक भन्छ, ‘शताब्दी अन्त्यसम्म यो क्षति बढेर पाँच गुणा पुग्न सक्छ । त्यतिबेला आर्थिक तस्बिर पनि धमिलो हुनेछ ।’ यस्तो लाग्छ, लेखकले अन्त्यसम्म पनि पुस्तकको शीर्षक ‘जलवायु विपत्बाट कसरी बच्ने’ लाई सार्थक पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । कोण–कोणका पक्ष केलाएका छन् । कम्प्युटर सफ्टवेयरको मौलिक सोचलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न सफल बिलले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांकलाई यसरी केलाएका छन् कि त्यसले पाठकको मस्तिष्क तरंगित बनाउँछ । र, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक नेता तथा विकसित–अविकसित, लोकतान्त्रिक–तानाशाही सबैखाले देशका शासकलाई प्रचलित विकास मोडलबारे घोत्लिन बाध्य पार्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७८ ०९:५८